Ixabiso eliphantsi elenziwa ngentambo yerabha yokuhambisa umatshini kunye nefektri | YiZheng
Usetyenziselwa ntoni umatshini weRubber Belt Conveyor?
Inkqubo ye- Irabha Belt swa Machine isetyenziselwa ukupakisha, ukulayisha kunye nokwehliswa kwempahla kwindawo yokugcina izinto kunye nendawo yokugcina izinto. Inezinto eziluncedo kulwakhiwo olumbeneyo, ukusebenza ngokulula, intshukumo efanelekileyo, inkangeleko entle.
Irabha Belt swa Machine ikwalungele imveliso yezichumiso kunye nokuthuthwa. Ngumatshini oqhutywa kukukhuhlana ohambisa izinto ngokuqhubekayo. Oku ikakhulu iqulathe yokubeka, ibhanti yokuthutha, mqengqeleki, isixhobo koxinzelelo kunye isixhobo transmission.
Umgaqo wokuSebenza woMatshini oSebenzisa iRubber Belt
Inkqubo yokudlulisa izinto yenziwe phakathi kwendawo yokuqala yokutya kunye nendawo yokugqibela yokukhutshwa kumgca othile wokuhambisa. Ayikwazi ukwenza kuphela ukuhanjiswa kwezinto ezisasaziweyo, kodwa ikwenze nokuhanjiswa kwezinto ezigqityiweyo. Ukongeza kwizinto zokuhamba ezilula, inokusebenzisana neemfuno zenkqubo yezobuchwephesha kumashishini ahlukeneyo ukwenza umgca wokuhamba wokuhamba wokuhamba.
Iimpawu zeRubber Belt Conveyor Machine
1. Advanced kwaye elula kubume, kulula ukuyigcina.
2. Umthamo wokudlulisa ophezulu kunye nomgama wokudlulisa omde.
3. Isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi, kwimetallurgic nakwimveliso yamalahle ukuhambisa isanti okanye into yokuhamba, okanye izinto ezipakishiweyo.
4. Licandelo elibaluleke kakhulu koomatshini abangahambiyo kwimeko eyodwa.
5. Ingenziwa ngemfuneko.
Irabha yeBelt yokuhambisa umatshini Umboniso weVidiyo
Irabha yeBhanti yokuhambisa iModeli yoKhetho
Belt Ububanzi （mm)
Ubude beBelt （m) / Amandla （kw)
Isantya （m / s)
Umthamo （t / h)
Egqithileyo Iscreen Screen neentshukumo
Okulandelayo: Ukuhanjiswa kweBelt yokuhambisa ephathekayo
Intshayelelo Yintoni i-Disc / Pan ye-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator? Olu luhlu lwediski ye-granulating ixhotyiswe ngemilomo emithathu yokukhupha, iququzelele imveliso eqhubekayo, inciphisa kakhulu amandla abasebenzi kunye nokuphucula ukusebenza kwabasebenzi. Isinciphisi kunye nokusetyenziswa kweemoto kwebhanti eguqukayo ukuqhuba kakuhle, ukucothisa ifuthe ...